Dooda Jimcaha - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Maarso, 2013, 17:24 GMT 20:24 SGA
Halkan ka dhagayso barnaamijka dood ku saabsan doorashooyinka Kenya.
Kenya waxaa ka dhacaysa doorasho guud 4-ta bisha Maarso. Waa doorashadii ugu horaysay ee kenya ka dhacdo, kadib markii uu dalka yeeshay dastuur cusub oo loogu tala galay in looga hortago in mar kale Kenya ay ka dhacaan rabshado la mid ah kuwii shan sanno ka hor ka dhacay dalka ee daba socday doorasho natiijadeedii lagu murmay.
Waxaa ugu cad cad musharaxiinta, Ra'iisal Wasaraha xilka baneynaya Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo ah will uu dhalay madaxweynihii ugu horeeyey dalka Kenya Mzee Jommo Kenyatta.
Labada musharax si aad ah ayey isugu dhowyihiin.
Halkan ka dhagayso barnaamijka dood ku saabsan doorashooyinka Kenya. Waxaa soo jeedinaya weriyaha BBC-da Mohammud Ali.